Zimbabwe v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at QSC, Bulawayo, Mar 12 2018International Cricket Council
14 PhotosGallery 11 Mar 18
Zimbabwe v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at QSC, Bulawayo, Mar 12 2018
Safyaan Sharif (R) of Scotland celebrates taking the wicket of Graeme Cremer (unseen) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Michael Leask of Scotland celebrates taking the wicket of Solomon Mire (Unseen) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Safyaan Sharif (R) of Scotland celebrates taking the wicket of Hamilton Masakadza (L) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Blessing Muzarabani (L) of Zimbabwe is bowled out by Safyaan Sharif (R) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Brad Wheal (L) of Scotland celebrates taking the wicket of Brendan Taylor (R) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Sean Williams (2ndL) of Zimbabwe celebrates taking the wicket of Callum MacLeod (C) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Tendai Chisoro (C) of Zimbabwe celebrates with Tendai Larry Chatara (L) after taking the wicket of Craig Wallace (unseen) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at QSC on March 12, 2018 (©ICC).
Blessing Muzarabani of Zimbabwe celebrates taking the last wicket of Brad Wheal (unseen) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at QSC on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Blessing Muzarabani (C) of Zimbabwe celebrates taking the last wicket of Brad Wheal (unseen) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Safyaan Sharif of Scotland with his Player of the Match award during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Graeme Cremer of Zimbabwe celebrates after taking the wicket of Richie Berrington (unseen) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Michael Leask of Scotland reacts after the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Tendai Chisoro (L) of Zimbabwe celebrates after taking the wicket of Tom Sole (R) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Zimbabwe and Scotland at Queens Sports Club on March 12, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).